यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं ! | Dainik Sanjal
Home रोचक यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं !
ebay मा एउटा भारतीय नोटको मूल्य यति कायम गरिएको छ
यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ ! त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ! उक्त वेबसाइटमा गएर auction बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको नोटमा कति जना मान्छे ले खरिदको लागि विड गरेका छन् सबै हेर्न मिल्ने छ !
के तपाई संग नेपाली पुराना रूपैय छन् ? छन् भने आजै ebay को खाता बनाएर बिक्रि सुरु गरिहाल्नुहोस् ! छैनन् भने यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस भएका हरुले थाहा पाई आफ्नो पैसा बेच्न पाउन !